Mpako Speech na Ebube Chineke — njem Lee - Official Site
Ndị okenye bụ otu ụzọ. Ọtụtụ mgbe, anyị na-na na OK na-eme ihe anyị na-adịghị kwesŽrŽ ime, ka anya dị ka onye anyị na-aza na-adịghị chọpụta. Ị obi ụtọ na adị ruo mgbe ị na-ahụ cops n'ihu. Ma eleghị anya, anyị na-enwe obi ụtọ na-ahapụ ọrụ n'oge dị ka ogologo dị ka anyị onyeisi adịghị chọpụta. Ma eleghị anya, ụfọdụ n'ime anyị na-aghọ aghụghọ n'ule dị ka ogologo dị ka prọfesọ anaghị enweta anyị. Anyị na-adịghị na-emekarị na-eche ma ọ bụrụ na ndị mmadụ maara na anyị na-eme ihe na-ezighị ezi, ọ gwụkwala ma ọ bụ ikike anyị nwere ịza ka.
na 1 Samuel 2, Hannah ekpe ekpere omume ọmụmụ nke nwa ya nwoke Samuel. Na na ekpere a, ọ dọrọ aka ná ntị ndị ọzọ ghara ime otu mmehie, n'ihi na ha Onyeikpe na-ele. Tụgharịa na m na- 1 Samuel isi 2, amaokwu 3.
Unu na-ekwu okwu otú nganga ma ọ bụ ka ọnụ gị na-ekwu okwu ndị dị otú ahụ dị mpako, n'ihi na Jehova bụ Chineke bụ onye maara, na onye omume na-anyịgbu.
Na nke a ederede, Hannah adọ aka ná ntị anyị megide nganga nke gụnyere ikwu okwu, n'ihi na Chineke ga-ahụ na Ọ ga-ejide anyị na ya. Nke ahụ bụ ihe m na-eche isi ihe amaokwu a bụ: Ọ bụrụ na ị na-agwa nganga, ị ga-aza Chineke maka ya.
Anyị nwere ike iji na-eche anyị nganga nke gụnyere okwu na-adịghị n'ihe ọtụtụ. Ma ọ bụrụ na ị na-eche gị nganga nke gụnyere okwu na-adịghị mkpa, M egwu unu. Ha kwesịrị bụghịrị gị, n'ihi na ha na-emetụta Chineke, Ọ bụ Onye na i nwere na-aza. Anyị agaghị akpatre zaa ndị mụrụ anyị, ma ọ bụ enyi anyị, ma ọ bụ anyị ozuzu aturu, ma Chineke.
N'iburu nke ahụ n'uche, M chọrọ ịjụ a ajụjụ ole na ole iji ghọta ederede mma.
ajụjụ 1: Gịnị Ka Ọ Pụtara na-ekwurịta Ji nganga?
Ọ pụtara iji gị okwu ibuli elu onwe gị.
Ugbu a a na anyị ga na-eche nke onwe-ebuli okwu ka nnọọ nanị etu ọnụ banyere otú ịtụnanya anyị, ma e nwere ọtụtụ ụzọ na-ekwurịta ji nganga. Na m na-eche otu n'ime ụzọ ndị Hannah bu n'uche bụ ihe anyị na-ahụ na isi 1.
Hannah, nwunye a nwoke aha ya bụ Elkena. Ọ bụghị naanị ya na nwunye ezie. O nwere otu ihe nwunye nke aha ya bụ Penina. Penina nwere umu, ma Hana bụ nwanyị aga. Penina ga isi-ama Hannah banyere ya. Na n'ihi enye ekedide ada na a ụta Hannah wutara ya na ọ ga-akwa ákwá.
M na-eche Penina bụ ihe atụ nke nganga nke gụnyere okwu Hannah adọ aka ná ntị anyị megide. Penina na-abụghị nanị na-akọwa eziokwu ahụ bụ na o nwere ụmụ. Ọ bụghị naanị agbalị ichetara Hannah ndị mere eme. Ọ nọ na ụta ya, etu ọnụ ya, na-emekpa ya.
Na dị nnọọ na-ada ka ọ na-aka ike. Olee otú ọ na-ekwu okwu ji nganga? Ọfọn, o yiri ka Penina na-eji nke a dị ka a ụzọ na-ekwu onwe ya n'elu Hannah. O yiri ka ọ nọ na anya isi na n'ụzọ ụfọdụ ya amị nke ụmụaka mere ya mma karịa Hannah, nke bụ abụghị eziokwu. Akwụkwọ Nsọ kwuru hoo haa na ụmụaka bụ ndị na a onyinye si n'aka Chineke. Penina na-ekwu ji nganga, na ọ ga-aza Chineke maka ya.
Ụzọ anyị na-ekwu Ji nganga
Ma anyị na-aghọta ya ma ọ bụ, anyị niile na-ekwu ji nganga na-ekwu na mpako na a n'ụzọ dịgasị iche iche:
1. Otu ihe doro anya n'ụzọ na-etu ọnụ banyere anyị rụzuru. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike na-eche na-agwa ndị ọzọ banyere ihe anyị nwere na ihe anyị na-na-emezu. Ma anyị na-adịghị na-eto Chineke n'ihi na ọ na-; ihe mgbaru ọsọ na-eme ka anyị yie mma. M na-ejide onwe m na-eme nke a na ọtụtụ mgbe. Ma eleghị anya, na-agba ọsọ n'ime otu agadi enyi ha na-ajụ m ihe m na-eme. M nwere ike ikwu rapping, ma m ga kama na-ezo aka awards ma ọ bụ ndị ọzọ rụzuru.
2. Ma ọ bụ otú banyere ihe ndị anyị na-ekwu banyere ndị ọzọ? Mgbe ụfọdụ, anyị na-ekwutọ ndị ọzọ. Anyị chọrọ agba ha a ọjọọ ìhè, otú anyị ga-anya ọma. Ma eleghị anya, na-arụ ọrụ na anyị na-ekwu na a akpan akpan ngalaba-ọrụ mara mma umengwụ, nke mere na ndị mmadụ ga-achọpụta ihe dị iche n'etiti unu abụọ. Ma ọ bụ ma eleghị anya, kama ịsị na ọ na-eme amara na ndị ọzọ, anyị na-na na ezi omume n'anya onwe. Anyị na-eguzo dị ka a ikpe n'ebe ha, n'ihi na ọ na-eme ka anyị na-eche mma banyere ime mmụọ anyị rụzuru. Nke ahụ bụ nganga nke gụnyere ikwu okwu.
3. Ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, ọbụna mgbe anyị na-ekwu ihe ọma. Ma eleghị anya, ọ bụ a na-agba akaebe na a Sunday n'abalị. Ọ nwere ike bụrụ oké ọgba akụkọ banyere ọrụ Chineke na a enyi ndụ, ma gị ebumnobi nwere ike ịbụ ebube gị kama Chineke. Ma ọ bụ na-ekwe ka onye maara na ị na na na a na-ekpe ekpere maka ha. Ma ọ bụ na-akụziri a Sunday School na klas. Ọbụna ezi ihe nwere ike ịbụ mpako okwu ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị na-ebuli onwe gị.
Ụfọdụ n'ime ihe atụ ndị a na-adị mfe nchọpụta, ndị ọzọ. Ya mere, olee otú ị mara ma ọ bụ? Gịnị ekewapụ mpako okwu site n'ikwu eziokwu? Ịgwa ji nganga na-mgbe ị na-ekweta na Chineke dị ka Onye na-bụ Ọkaakaa, kwesịkwa ebube, n'ime obi gị ma ọ bụ okwu onwe ha. Ma mgbe anyị na, anyị na-ebube ahụ bụ nke Chineke.
Okwu gị pụrụ ikweta na Chineke, ma ihe banyere obi gị? Ndị ọzọ ndị mmadụ nwere ike na-enwe ike ịmata ihe dị iche, ma Hana na-echetara anyị na Jehova Chineke bụ onye maara. Ma ọ bụrụ na anyị na-eji okwu anyị ibuli elu onwe anyị, anyị ga-aza Ya maka ya.
Ke ederede Hannah na-agwa anyị ghara ikwu ji nganga, na mgbe ahụ ọ gwara anyị ihe mere: n'ihi na Jehova bụ Chineke nke maara ma dịrị ihe omume.
ajụjụ 2: Gịnị mere anyị ji na-Zaa Chineke maka mpako Speech?
N'ihi na ọ bụ mbuso agha na ebube Ya.
Ọ bụrụ na naanị otu onye n'ime ndị na abụọ ikpeazụ nkebi ahịrịokwu bụ eziokwu, ọ ga-agbanwe ọtụtụ. Ọ bụrụ na Chineke maara, ma o nweghị onye-ikpe, ma ọ bụ ọ bụrụ na Chineke bụ onyeikpe ma ọ maghị. Ma zuru okè dị nnọọ Onyeikpe bụkwa maara ihe nile Chineke. Ọ bụghị naanị na Chineke ga-achọpụta, Ọ na-ege ntị. Chineke bụ mgbe niile na-ekiri na mkparịta ụka ọbụla na-eme. Fọrọ nke nta ka O nwere enweghi ngwụcha ego nke nche ese foto enịm ke ọ bụla square ụkwụ nke ụwa. ọ maara. Na ọ bụrụ na anyị ọgụ ebube Ya na mpako okwu, Ọ ga-ama.
Ọ bụrụ na m bụ ka a gaa n'ime gị akụ, ma na-ego na-etinye ya n'ọrụ akaụntụ m, bụ na-ezu ohi? N'ezie ọ bụ. Ihe m na-ihe na nke gị, na itinye ya onwe m. M nwere ike mbà onwe m ọ bụla nke gị ego na-enweghị na-ewere ya na ị. Na ọ bụ ihe ọjọọ n'ihi na ọ bụ nke gị.
Mgbe mmadụ na-agbalị inye onwe ha otuto, nāpunara ha Chineke nke Ya. Ị gaghị-akụrụ onwe gị otuto na ebube, -enweghị na-ezu ohi site na Chineke. Nganga na onye agha na Chineke otuto. Gịnị mere? N'ihi na ihe overestimation nke onwe-abịa site underestimation nke Chineke. Ka m na-ekwu na ọzọ: ihe overestimation nke onwe abịa site underestimation nke Chineke. Na dị ka anyị na 1 Samuel 1, a underestimation nke Chineke, na-eduga onye na underestimation nke ndị ọzọ. Ya mere, na-eche echiche gabiga ókè nke anyị onwe anyị na-abịa site na-eche echiche oke enweghị ka ọ hà Chineke, na-eduga ná eche kwa enweghị ka ọ hà nke ndị ọzọ.
Penina e chere. Ọ overestimated onwe ya site n'itinye onwe ya on Ọkaakaa ocheeze, dị ka ma ọ bụrụ na o meghere ya n'akpa nwa. Na na anyị na-ikpe nke otu. Anyị na-eche na anyị na ndị na-ga-enweta otuto maka na nkwalite, ma ọ bụ ndị na akpa ezi àgwà ụmụ, ma ọ bụ anyị ọnọdụ ego. Ee, Chineke ga-agọzi anyị ịrụsi ọrụ ike, ma nke ahụ adịghị ekwe nkwa ihe ọ bụla. Uche Chineke bụ n'ezie na-ekpebi ihe na-akpata ọnọdụ ọ bụla. Ihe dị mkpa akpatre adịghị ike-ayi, anyị amamihe, ma ọ bụ ọbụna anyị ikwesị ntụkwasị obi.
nganga nke gụnyere Speech
Ya mere nganga na-ezighị ezi. All nke anyị nwere ụfọdụ mpako na obi anyị na anyị ga-alụ ọgụ. Mgbe ị na-eche na obi gị na i kwesịrị otuto, na ya onwe ya bụ mmehie. Ma nganga nke gụnyere okwu na-ewere ya ọzọ larịị. Olee otú anyị, dị ka mmehie mmadụ, nwere audacity, ọ bụghị nanị na-eche na anyị na-na na kwesịrị ebube Chineke, ma ka na-eweta ya na ụzọ ndị ọzọ? Iji na-agbalị ka o doo ndị ọzọ aka inye anyị ebube nke Chineke dị naanị. Ịgwa nganga bụ dị ka ọ bụghị nanị na-ezu onye, ma na-agwa onye ọ bụla banyere ya na-agba ha ume ime otu ihe ahụ.
Naanị ihe bụ, Chineke adịghị mkpa video footage mara na ị na-ikpe. Chineke agaghị anabata mmadụ na-agbalị iji napụ Ya nke ebube-Ya na agba ndị ọzọ ume ime otu ihe ahụ. Nke bụ ya mere Hannah ekwu anyị ekwesịghị ime ya.
Nganga nke gụnyere okwu na-atụtụ a agha na Chineke, nke mere na ọ bụ ekwekọghị na ndu onye kwere ekwe. Dị ka anyị nụrụ nke a ụtụtụ, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma na-enye amara-ala n'obi. "
Ọ bụrụ na anyị na Kraịst, anyị mpako okwu, ga-ihe ọzọ mere ka Chineke taa anyị ahụhụ. Anyị omume ọjọọ ga-anọgide na-enyere ọtụtụ ikpe megide anyị. Ọ bụrụ na ị bụghị na Christ, ọ dịghị ihe ọzọ na-emenye ụjọ karịa ihe niile na-Ịmara Onyeikpe. Ya mere ọ bụrụ na ị na-ebe a n'abalị a na ị na-adịghị Jesus, biko aka ịmata Ya. Hapụ gị mmehie, na tụda onwe gị na ebere-Ya. Ọ bụ incredibly umeala n'obi-adị umeala n'obi iji anwụ n'ihi ya na ndị mmehie ka m na gị nwere ike na-ebi. Ọ si n'ili bilie na ike nile, na oku ikom na-eso Ya. Anyị ga-amasị m ịgwa gị banyere na mgbe emechara.
Ma dị ka ndị Kraịst, gịnị ka ọ pụtara n'ihi na anyị omume ga-ntukwasi? Ọ bụla kwere ekwe n'ime ụlọ a ga-aza Chineke maka ọ bụla mpako okwu ha na-ekwu, ma anyị ikpe ga-adị iche. Christ nweela anyị mmehie anyị na cross. Ma nke a ịdọ aka ná ntị kwesịrị ka mmetụta otú anyị si ebi. Mgbe anyị na-eguzo n'ihu Chineke, anyị na-eme ga-ma na-agba akaebe na eziokwu na anyị na tụkwasịrị Christ ma ọ bụ na anyị nnọọ mpako na-atụkwasị obi naanị n'ime Kraịst.
Ọzọkwa, anyị chọrọ ime ihe na Nna. N'ezie Ọ na-mma na anyị na Kraịst, ma anyị chọrọ ya ga-ụtọ na anyị ezi ọrụ na-esi okwukwe na Kraịst. Anyị chọrọ ime ihe anyị hụrụ anyị n'anya Chineke.
Anyị ekwesịghị ikwe ka mpako okwu na-abịa site n'ọnụ anyị. Ma ọ bụ ezie na anyị ga-aza Chineke maka anyị mpako okwu, anyị kwesịrị ito Chineke na mmehie anyị na-kpuchie ke Christ.
Ya mere, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Chineke otuto site na okwu anyị, olee otú anyị na-alụ ọgụ mpako a, okwu?
ajụjụ 3: Olee Otú Anyị Lụọ mpako Speech?
Anyị na-eme ya site na-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke.
Anyị kwesịrị ile okwu ọnụ anyị na, ma nke ahụ bụ ezughị. Ọ bụ dị ka na-agwa onye na a oyi ihe ngwọta na-dị nnọọ ka jide ha zeeuere na. No, na ọrịa bụ ihe kwesịrị ka a wakpoo.
The mpako na-aṅụrị ọṅụ na ya onwe ya. Ma ndị dị umeala n'obi na-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke. Ele anya na nke mbụ okwu n'ekpere Hana bụ n'amaokwu 1: "Obi m na-aṅụrị ọṅụ n'ime Onyenwe anyị." Hannah egosi anyị kwesịrị ekwesị omume Chineke ngọzi. Ọ bụghị naanị aṅụrị ọṅụ ka Jehova nyere, ma Onye na-enye onwe Ya. Mmeghachi omume anyị nwere ike ịbụ mpako, kama ọ ga-emepụta ịdị umeala n'obi na anyị, n'ihi na anyị na-enweta onyinye si n'aka Chineke
Chineke na-enye na-ewepụ. Chineke ekesa na egbochi. Ma Ọ na ya maka ọdịmma anyị na ebube Ya. Anyị falter mgbe anyị na-amalite-adabere na ihe ndị ahụ nke ukwuu. Na-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke na-egbu ma na nganga na enweghị olileanya.
Olee otú ị na-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke? Na-eme ihe ọ na-ewe iji na-echetara onwe gị onye bụ onye na azu ihe nile. Toonụ Chineke mgbe ị na-enweta na ego. Nke a bụ ya mere na anyị na-ekele Chineke tupu anyị nri. Na-echeta na ọ bụ mpako iche atụmatụ anyị ga na-aga pụta. Ekwu Jehova njikere. Nye Chineke otuto mgbe ndị ọzọ ikele unu na gị rụzuru. Unu maka nkeji ekwe ka obi gị na-akwụmụgwọ. -Ele gị nganga nke gụnyere ikwu okwu. -Ahụ na mgbọrọgwụ nke mpako na obi gị.
Ọ bụla otu n'ime anyị, ka e nyere ihe dị ịtụnanya ohere na onye ọ bụla okwu anyị na-ekwu. Anyị na-enweta ka anyị jiri okwu ito Chineke nke kere anyị. Anyị na-enweta ka anyị jiri okwu iji nyere ndị ọzọ ịhụ Chineke n'ihi na Onyenwe anyị dị ebube na Ọ bu.
Ya mere m agbamume na-adịghị na-eji gị okwu ibuli elu onwe gị. Kama, eji ha na-eme ihe e kere gị ime-enye Chineke otuto. Ọ niile bụ nke ya na agbanyeghị.
Ka anyị ikpe ekpere.
aimsbaker • September 10, 2013 na 1:39 pm • zaghachi
Nke a bụ nnọọ ume ọhụrụ na ikpe. Daalụ nke ukwuu! M nwetara ụfọdụ na-amụ ga-eme ka iru m kpebisikwuo a n'ezie.
faithchanda171 • September 10, 2013 na 1:47 pm • zaghachi
hụrụ n'anya onyenwe,anyị ṅụrịa na nanị gị onwe gị kwesịrị niile glory.help anyị onyenwe na-aṅụrị ọṅụ na gị mgbe niile na ọ bụghị ka ị ghara inwe ebube na ike anyị niile na-eweda ya ala n'ihu. Gbaghara anyị maka imejọ gi na mmadụ ihe mgbe anyị na-ekwu okwu mpako. Ime hụrụ n'anya aka ịbụ ihe akọ na uche na ihe anyị na-ekwu…Amen
Godson • September 10, 2013 na 1:52 pm • zaghachi
onye Okike, ọ dịghị onye bụ ukwuu karịa nke Onye Nzọpụta game-changer / demon-oti na dịghị mkpa a player
Christopher • September 10, 2013 na 2:24 pm • zaghachi
Mmadụ iwebata wetara m na…ọ bụ eziokwu! Kemgbe m na-na na nwere ụmụ nke aka m m na-ahụ onwe m na ha kwa ụbọchị. The dum ozi ị nyefee gọzie m! Grace na Peace!
gọziri agọzi • September 10, 2013 na 3:16 pm • zaghachi
Ya mere na-edozi! Daalụ! ahụrụ m nke a n'anya: “Ịgwa ji nganga na-mgbe ị na-ekweta na Chineke dị ka Onye na-bụ Ọkaakaa, kwesịkwa ebube, n'ime obi gị ma ọ bụ okwu onwe ha. Ma mgbe anyị na, anyị na-ebube ahụ bụ nke Chineke” na a:”Mgbe anyị na-eguzo n'ihu Chineke, anyị na-eme ga-ma na-agba akaebe na eziokwu na anyị na tụkwasịrị Christ ma ọ bụ na anyị nnọọ mpako na-atụkwasị obi naanị n'ime Kraịst.”
QuincyStroman • September 10, 2013 na 3:45 pm • zaghachi
Jehova na-eji gị ume m na Okwu ya… An Thass Good News
eveno M. • September 10, 2013 na 3:48 pm • zaghachi
Nke a bụ a magburu onwe-agụ. Ọbụna anyị ịdị umeala n'obi, anyị kwesịrị ịkpachara anya na anyị na-agaghị eme iji ikom ahụ na anyị dị umeala n'obi, nke ya onwe ya bụ nganga nke gụnyere.
Ọ na-akọwa ihe mere ndị ọkà ihe ọmụma Grik ekweghị na ịdị umeala n'obi bụ àgwà ọma n'ihi na ọtụtụ nwere ike adịgboroja ya.
Daalụ maka nkekọrịta.
Jason • September 10, 2013 na 5:29 pm • zaghachi
M na-apụtaghị itu Njem n'okpuru bọs ma ọ bụ nwere ihe ọ bụla n'uche na-amalite a arụmụka online. M nario nkọwa. M a na-adịbeghị anya gụsịrị akwụkwọ na-achọ ọrụ. Olee otú anyị adịghị ekwu okwu ji nganga na a ọrụ ọnụ ebe anyị nwere n'ụzọ ụfọdụ inwe ntụsara banyere akọwa ezi rụzuru na o kwere omume n'ọrụ?
njem Lee • September 11, 2013 na 10:40 Abụ • zaghachi
Ị na-agaghị na-atụba m n'okpuru ụgbọ ala dị egwu! M na-eche na nke ahụ bụ a oké ajụjụ. Dị ka m kwuru n'elu, mpako okwu bụ mgbe ị na-eji okwu gị ibuli elu onwe gị. Ọ bụ mgbe ị na-ajụ ikwere na Chineke dị ka Eze, kwesịkwa ebube.
Ị nwere ike ịkọwa gị rụzuru na kwenye onye ị ga-eme ezi ọrụ a na-enweghị ezu Chineke nke ebube-Ya (ka emechara, anyị na-asọpụrụ Ya na-edu anyị na-arụ ọrụ ya nke ọma). Ị na-adịghị na-ekwu “Chineke ka otuto” mgbe ọ bụla ikpe, ma ị ga-eme ya niile na a umeala postcho aghọta na Chineke dị ka ndị na-enye ihe niile ezi onyinye. E nwere ihe a nnukwu ihe dị iche n'etiti ji obi umeala na-atụ gị amaka ma ọ bụ mpako na-etu ọnụ. ka ihe ezi uche?
Jesse • September 11, 2013 na 1:13 pm • zaghachi
Kedu, na a omenala na frowns n'elu Christian ụkpụrụ a na-egosipụta, na-anyị ka e were ya na-, ma jide otu ihe n'eziokwu na-akwụ ụgwọ ọrụ, enweghị anyị nganga na-kasị mma nke anyị? M na-adịghị agbalị atụbakwa gị n'okpuru ụgbọ ala ma na-achọta mmejọ, ma dị ka a na-eto eto bụ onye chọrọ emecha ka ọ na- “unashamed ndụ” na-agbasa ozi-ọma na ihe niile ha na-eme, Ọ dịkwa m mkpa a ọrụ. M na-eche na nsogbu na-enweghị ike igosi na anyị onwe na a n'ebe ọrụ na-enweghị egwu nke ịbụ chụọ n'ọrụ.
John • September 11, 2013 na 8:58 Abụ • zaghachi
Dị ka o kwuru, na-ekwu okwu ji nganga na-adịghị nnọọ na-ekwu eziokwu. Ọ na-achọ ibuli elu onwe gị kama nke Chineke. I nwere ike kwenye onye ị ga-eme ezi ọrụ, enweghị ezu Chineke nke ebube na o tosiri gị nkà na-arụ ọrụ
DaughterofGod • September 11, 2013 na 1:27 pm • zaghachi
M na-enwe ike mgbe ya na nke a see okwu: “Mgbe ị na-eche na obi gị na i kwesịrị otuto, na ya onwe ya bụ mmehie.” Mgbe m na-eme ihe oke, Achọrọ m a kutu aka na azụ, a okwu na-agba ume, ma ọ bụ ụfọdụ na-egosi na m na-arụ ọrụ na-nyere dị ka ndị magburu onwe. Anyị na-eto na-eme egwuregwu na egwuregwu ìgwè na-agbalịsi ike, na anyị dum ụwa na-arụ ọrụ enọ na nyiwe na-asọpụrụ mma. Mere, olee otú m fọrọ 'nwụọ’ ọchịchọ a nke m mgbe, n'eziokwu, Achọghị m ka? Echere m na dị nnọọ site na, na obi anyị, na-ekweta na anyị mma na ọrụ aka anyị na-abịa site n'aka Ya, na n'ikwu na niile accolades anyị na-enweta Ya.
Michael • September 11, 2013 na 1:49 pm • zaghachi
M nnọọ na-ohere-a na-ekele gị (njem Lee) n'ihi ikwe ka Chineke na-eji gị na-eto ya. M na nwunye m n'ezie enwe gị music. Anyị mmasị song n'ezie bụ “ezi Ihe”. M na-agụ na ị Akwụsịrị eme music ka n'ihu achụso n'ozi gị, Nke a bụ eziokwu? Anyị mkpa karịa rappers dị ka gị Bro.
JB • September 11, 2013 na 3:46 pm • zaghachi
Njem m ekweta na ọtụtụ ihe niile ị na e kwuru na a blog banyere uru nke anyị okwu ma e wezụga okwu gị mere na “Chineke na-enye na-ewepụ na ọ ekesa na egbochi”. Chineke bụ 100% mma! E nwere bụghị ihe ounce nke njọ ya ka na-agbalị ime ihe ọjọọ ma ọ bụ iwepụ ihe ọ bụla anyị. Satan steals (ewe / egbochi), egbu, na-ebibi. Anyị dị ka ndị kwere ekwe (ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị kwere ekwe) na-eme ya ka anyị onwe anyị site isi (ma ọ bụ ha amaghị) ime mmụọ ọkọlọtọ Chineke-ama enịm n'ụwa. Chineke kpọrọ nganga asị n'ụzọ bụ isi n'ihi na ọ na-akpata a mkpọchi na-enweta zuru ịdị mma ọ ukwuu chọrọ ka anyị na nke ga-enye Setan (na ndị agha ya) iwu nri bata capitalize na anyị nganga nke gụnyere ụzọ. Nke a na-asị okwu ma ọ bụ na-agbalị ịgwa gị ma ihe na-emeghe mkparịta ụka nke m kwere bụ abamuru nke a blog.
njem Lee • September 12, 2013 na 1:23 pm • zaghachi
Daalụ maka ịgụ ihe! Na gị na-agba ume okwu. Ekwenyere m na gị na Chineke bụ 100% mma. O doro anya banyere na. Ma nke ahụ apụtaghị na Ọ dịghị-ewepụ. Gịnị banyere Job 1:21? Ụfọdụ n'ime ihe m kwuru n'elu bụ kpọmkwem e kwuru si na amaokwu. "Agba m ọtọ si n'afọ nne m, ma gba ọtọ, m ga-apụ. Jehova we nye na Jehova weere; nwere ike na-enye aha Onyenwe anyị ga-enye otuto. "
Ya mere Chineke adịghị ewepụ, Ọ bụ ka na-ezi. The mara mma ihe, Chineke na-eji ọbụna ihe ọjọọ ezi ihe ná ndụ nke ndị Ya. Ndị Rom 8:28 bụ ezi ihe atụ nke a. M nwere ike dee a dum post on a otú m nwere ike ime ka o doo anya na. Ekele ọzọ maka ịgụ!
RW • September 11, 2013 na 8:35 pm • zaghachi
Ka Njem kwuru, Chineke maara ihe niile. Ma ị na-enye Chineke otuto n'olu dara ụda ma ọ bụ ịnara otuto maka gị rụzuru n'olu dara ụda, Chineke maara onye obi gị na-enye otuto. Na-ekwu okwu Chineke otuto mkpu nwekwara ike ịbụ na nganga okwu ma ọ bụrụ na obi gị na-adịghị n'ezie na-enye Chineke otuto. Mgbe anyị na-mgbe niile na-ekwu okwu nke Chineke otuto gburugburu ekweghị ekwe, anyị dị ka Penina na-ekweghị ekwe dị ka Hannah. Dị ka ndị Kraịst, anyị nwere àgwà na-eche egwu mgbe anyị nwere ike ọ bụghị n'ihu ọha na-eto Chineke. N'etiti ekweghị ekwe anyị dị ka Penenniah na a ime mmụọ ngọzi kama ha na ụmụ-ekweghị ekwe na-Hannah na na-ekpe na-enweghị ngọzi ndị dị otú dị ka Hana bụ enweghị ụmụaka. Ihe anyị na-eche bụ Chineke otuto, n'ezie na-etu ọnụ nke anyị ngọzi. Anyị ga-adị njikere inye Chineke otuto mgbe niile ma anyị ga-echefu banyere furu efu mkpụrụ obi ndị na-ahọrọ-adị na Ya. Ị nwere ike na-ude nke gị rụzuru na ọbụna ibu ibu enweghị na-ewere ebube site n'ebe Chineke. Ị natara ngọzi ndị n'ihi na ị họọrọ na-eje ije-Ya ụzọ. Enye Chineke otuto na obi gị, echiche, na ekpere. Okwu gị bụ ndị dị nnọọ ka, okwu. Mgbe na-edina ma. Ọ bụrụ na onye interviewer jụọ otú ị na mere ihe ndị ị na mere, eji okwu okwukwe. Okwukwe bụ gị oke, site gị nhọrọ Chineke họọrọ ka na-agọzi gị, site n'inye Chineke otuto n'ihi ngọzi ndị ọ ga-anọgide na-eme otú. On ọzọ dee, ma ọ bụrụ na ị na-adọga inweta ọrụ na-agbalị iru eru Chineke ọbụna ihe.
Jonathan • September 11, 2013 na 8:53 pm • zaghachi
Nke a bụ a ozi m maa mkpa ịnụ. M na-alụ na-onwe-ezi omume ọbụna na Facebook posts na-banyere Chineke. Echere m na m mkpa ka anya miri n'ime m ji chọọ ihe niile m na-eme. My ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị na-Christ, ma ọ bụrụ na y'all ga, ekpe ekpere maka m!
Megan • September 11, 2013 na 10:27 pm • zaghachi
ekele nke ukwuu maka-ekere òkè gị ozi. na na 14 na ezinụlọ m adịghị aga chọọchị ka i mkpa n'ezie a na ndị ọzọ Christian ego na stof nyere m aka chepụta ihe bụ ihe banyere okwukwe ma ọ bụrụ na na-eme ka ọ bụla uche otú ekele unu maka na-ekere òkè ya n'ezie na-enye aka na-agba ume.
JB • September 12, 2013 na 3:35 pm • zaghachi
Igwu na Njem. Ịghọta na nzaghachi dị egwu ma dị mwute ikwu na anyị ga-ekweta na-ekwekọrịtaghị onye a. Akpa ọchị.. E nwere a amaokwu Job na-ekwu, “Chineke na-enye na ọ na-ewepụ” ma, ọ bụ okwu nke Job abụghị Chineke. Job bụ onye ezi omume na-enweghị ụta na n'anya Jehova ma na oge ọ gwara okwu ndị ahụ ọ bịara site na amaghị ele ihe anya nke otú o aghọta Chineke ejikwara. Agụ site na ndi fọduru nke Job (kpọmkwem isi 38-41) Chineke na-ekwu Job banyere otú amaghị na o kwuwo okwu ya ma na-ajụ ya ajụjụ banyere ya echiche. na Job 42:3 (IGBOB) Job wee sị Chineke, sị: “Ị gwara m ka m, 'Ònye ka i chere na ị na-ekwekọrịtaghị na atụmatụ ndị m? Ị na-amaghị ihe ị na-ekwu okwu banyere.’ M kwuru okwu banyere ihe ndị m na-ike ịghọta. M na-ekwu banyere ihe ndị m ebube; mara.” Mgbe ke 6 amaokwu Job kwuru: “N'ihi ya, m asị onwe m. M n'ezie nwute n'ihi ihe m kwuru banyere gị. Ọ bụ ya mere m na-na-anọdụ ájá na ntụ.” Mgbe ọ chegharịrị nke ahụ bụ mgbe ihe malitere iso ezigbo ọma maka ya ọzọ. Chineke chọrọ ka ọ na-ahụ na ọ bụghị-ewepụ ya nile stof (ọ bụ Setan) na ọ bụ egwu Job egosipụta na mmalite nke akwụkwọ na-ekwe ka Setan ohere tinye ndụ ya. Njem m na-achọghị ime ka a show nke mkparịta ụka anyị na ndị 'comment ngalaba’ ma ọ bụrụ na ị na-ahụ na ọ dị mkpa dị nnọọ kpọtụrụ m email maka reply. M na-enwe mmasị gị talent na obi gị na-efe Chineke nwoke. Mgbe e mesịrị
ego • March 28, 2017 na 4:13 Abụ • zaghachi
Quality isiokwu ma ọ bụ reviews bụ ihe nzuzo na-a na-elekwasị anya maka
ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ a nleta na web page, nke ahụ bụ ihe a na saịtị weebụ na-enye.
omume • November 23, 2017 na 3:14 Abụ • zaghachi
Y օ ị na-otú intereѕting! І Echeghị m na m na-na na n'ezie na-agụ sometһing ka na tupu.
S օ mma chọta a na ole na ole ezi thougһts on thіѕ isiokwu.
Rеalⅼy.. na-ekele gị maka na-amalite a elu. Nke a ѕite bụ ihe na-achọrọ na web, onye na ѕome оriginality!